Indlela yokuvula omnye umsebenzisi kwi-Instagram | Zonke iinkonzo ze-intanethi
I-Instagram sisicelo esisetyenziswa zizigidi zabantu yonke imihla. Ibe yenye yezona ndawo zisetyenziswa kakhulu kuthungelwano lwehlabathi, kwaye ayiyeki ukukhula okanye ukudibanisa imisebenzi emitsha. Kungenzeka ukuba usebenzisa iakhawunti yakho kwisicelo, ufumane umntu okucaphukisayo, kwaye ugqibela ngokuvimba lowo mntu.
Izizathu zinokuba zininzi, kodwa uyamvimba loo mntu, ongazukukwazi ukubona iakhawunti yakho ngale ndlela. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba emva kwethutyana, awufuni ukuba lo mntu avalwe kwakhona. Kule meko, i-Instagram isivumela ukuba singavali. Singakwenza njani oku?
Zininzi iindlela zokuphumeza oku, Nangona kuxhomekeke ekubeni uyalikhumbula na igama lomsebenzisi othe wamvimba. Ukuba kunjalo, unokukhangela kwi-injini yokukhangela kwaye xa ufaka iprofayili yakho uza kufumana iqhosha lokuvula. Kodwa, ukuba awulikhumbuli igama, i-Instagram igcina zonke iiakhawunti esizivalileyo.
Kule meko, siya kwiprofayile yethu kwaye ucofe kwimivumbo emithathu ethe tye ephezulu ngasekunene. Okulandelayo, kukhetho oluphumayo, sicofa kuqwalaselo. Ngaphakathi koqwalaselo kufuneka siyehla de sifumane Icandelo elibizwa ngokuba zii-akhawunti ezivaliweyo.
Singena kwaye apho sifumana uluhlu lweeprofayili ze-Instagram esizivalileyo. Into ekufuneka siyenzile kukungenisa iprofayile esinomdla wokuyivula ngoku. Xa ungena kwiprofayili, Siza kubona ukuba iqhosha lokuvula livela luhlaza. Yiyo kuphela into ekufuneka siyenzile. Ngale ndlela, iakhawunti ithi iyavulwa.
Xa sisenza oku, Sivulele umsebenzisi ku-Instagram. Siza kuphinda sikwazi ukubona iimpapasho zakho kwakhona kwaye loo akhawunti iya kuba nakho ukubona ezethu. Kwakhona, ngoku sinokulandela okanye ungasilandela. Nangona le iyinto ekukhathazayo, ungahlala uthulisa abasebenzisi kwiapp. Kwaye ukuba ufuna ukuya kwelinye inyathelo, ungacima abalandeli.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ungamvimba njani umntu kwi-Instagram